अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको भविष्य: पीआर लिने गरी आउने कि पढेर नेपाल फर्कने ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
डा. हेमन्त ओझा
-अष्ट्रेलिया । नेपाली किशोर किशोरीहरु अष्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने सपना बुनिरहेका हुन्छन् । तर, ती स्वप्नद्रष्टाहरुले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको अवस्था के छ, यहाँको सरकारको नीति कस्तो छ अनि कलेज पढ्न आउँदा ख्याल गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्षहरु के–कस्ता छन् ?
नेपालीहरुमाथि अष्ट्रेलियनको विश्वास भारतीयहरु भन्दामाथि देखिएको छ । तथ्यांकहरुले के देखाउँछन् भने यहाँ नेपालीहरुको आय दर र रोजगारीको स्तर भारतीय र चिनियाँ समुदायकोभन्दा राम्रो छ । अष्ट्रेलिया सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई केही समय अघिसम्म भारतीय नागरिकभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर भिसाका निवेदनहरु केलाउँथ्यो । त्यसो त यतिबेला अष्ट्रेलियामा घर किन्ने आप्रवासी समुदायमा पनि नेपालीहरु नै अगाडि छन् ।
अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियामा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र प्रोफाइलका बारेमा थाहा छैन । सिड्नीमा पढ्दैमा यहाँ भएका ८ वटा विश्वविद्यालयका एउटै हैसियत छैनन् । धेरै विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया बस्ने हुँदा कस्तो विश्वविद्यालयमा पढें भन्ने कुराले यहाँ निकै महत्व राख्छ । कतिपय विद्यार्थीहरु पढाइ सकेर नेपाल फर्कने उद्देश्यले अष्ट्रेलिया आएको पाइन्छ । तर, यहाँ आएपछि प्रायः सबैको अष्ट्रेलियामै बस्ने धारणा बन्दोरहेछ ।